कस्तो बाठो ! कारबाही हुने डरले राजिनामा दिएँ नेफ्टा महासचिवले : भित्री कुरो यस्तो | News Filmy
झण्डै पिटाई खाएका थिए
एउटा उखान छ नि । जो… उसैको ठूलो स्वर ! हो यस्तै ठूलो स्वर निकाल्दै चलचित्र प्राविधिक संघ (नेफ्टा) का महासचिव सुरज आचार्यले महासचिवको पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
हालै यूएईको दुवई शहरमा भब्यता पूर्वक सम्पन्न भएको नेफ्टा अवार्डमा मनोमानी भएको बिषयलाई आफूले रोक्न नसकेको भन्दै आचार्यले नाटकीय शैलीमा राजिनामा दिएपछि हामीले पनि लुकाईरहेको एक खबरलाई बाहिर ल्याउने प्रयाश गर्दै झूठ र सत्यता बीचको चुरो कु रो सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका हौ ।
प्रसंग झिकौ । गत बिहिबारको रातको जुन रात महासचिव आचार्य सहितको ५० जनाको फिल्मी टोली दुवई तर्फ लागेको थियो । काठमाण्डौ विमानस्थल देखिनै मदिराले लट्ठ सुरजको नाटकीय गतिविधि विमान भित्र प्रवेश गरेपछि अझ बढ्यो जति बेला उनले निर्देशक सुर्दशन थापा लगायतको एक टिमको गोजीबाट किनिएको मदिराले आफू थप रमाउँने मौका पाएँ ।
राति साढें ११ बजे फ्लाई दुवईको विमान काठमाण्डौबाट दुवईका लागि उडिरहेको थियो तव मध्य रुटमा पुगेको बेला सुरजले निर्देशक थापाका लागि मदिरा किन्ने काम जारी राखे र आफूले पनि पिईरहे ।
हरेक १० मिनेटमा विमानको पुच्छारमा जादै क्याविन क्रुलाई टर्चर हुने गरी उनले निरन्तर गफ गर्दै १०- १० मिनेटमा करिब १५ हजार नेपाली रुपैयाँको मदिरा (भोड्का) किन्ने क्रम जारी राखे ।
निर्देशक थापाको पछिल्लो तर्फको सिटमा चाँहि म न्यूज राईट अनुप भट्टराई (फरक कोण) थिए । बाँकी नेफ्टा अवार्डको टिम मलिन निर्दामा थियो । उनले सो समयमा म स्वयमलाई पनि मदिरा किनिदिन दुई पटक आग्रह गरिरहेका थिए तर उनले धेरै पिएका कारण मैले उनको कुरालाई सुनेको नसुनै भए । राति चाँडै ननिदाउँने बानीका कारण म चाँहि उनीहरुको गफलाई पछाडीबाट सुनिरहेको थिए र साथमा सुरजको गतिविधिलाई ज्यादा नियालिरहेको थिए ।
नेपाली समय अनुसार रातको करिब २ बजेको थियो । जव जहाजको पुछार तर्फ बाँया तिरको शौचालय सुरज छिरे तव माहोलमा केही परिवर्तन भएको मैले चाल पाएँ । ननिदाएको कारण मैले सुरजको गतिविधि नियाल्नु स्वभाविक थियो । त्यसकारण विमानको पुछार तर्फ हेर्दा क्याविन क्रुका एक पुरुष र दुई जना एयर होस्टेजले सुरजलाई निकै गालि गरिरहेका थिए । उनीहरुले रक्सीको नशामा मातिएका सुरजलाई किन चुरोट खाएको भन्दै केरकार मात्र गरेनन् ककपिटमा रहेका चलक दलका सदस्यलाई पनि उक्त जानकारी गराईसकेका थिए । सन्दर्भ बस सोही समय म विमानको पुछारमा पुगिहाले र माहोल नियन्त्रणमा लिन प्रयाश गरे ।
त्यस अघि एक एयर होस्टेजले ट्वाईलेटमा आधा पिईएर पानीले भिजेको चुरोटको ठूटो निकालेर मलाई देखाउँदै भनिन् । ‘तपाईको मान्छेले २ सय मानिसको ज्यानको जोखिमा राखेर चुरोट पियो अब आफै भन्नूस हामीले कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? ‘ त्यतिबेला एयरहोस्टेजको अनुहारमा क्रोध झल्किएको थियो भने हातहरु कापिरहेका थिए ।
तर चलाखी पूर्ण तरिकाले सुरजको पृष्ठभूमिबाट क्याविन क्रु सदस्यलाई फ्रेममा अटाउँने गरी मैले आफ्नो मोबाइलबाट एक तस्बिर कैद गर्न भ्याईसकेको थिए जसको जानकारी कसैलाई थिएन ।
त्यसकारण मैले बुद्धिमता पूर्वक क्रुलाई सपोर्ट गर्दै सुरजलाई गाली गर्न थाले र तपाई आफ्नो सिटमा गएर बस्नुस भन्न थाले । तर पनि सुरजले आफूले चुरोट पिएको छैन् भन्दै उल्टै बादविवाद गर्न थाले जुन सरासर झूठो थियो किन कि म टवाईलेट एरिया सम्म पुग्दा ट्वाईलेटबाट चुरोटको गन्ध निकै मज्जाले आईरहेको थियो ।
सुरजले दिएको हस्त लिखित राजिनामा पत्रको ब्यहोरा । राजिनामा पत्र ब्यहोरा सौजन्य फिल्मीखबरडटकम
विवाद करिब चार मिनेट सम्म चलिरह्यो । तर मैले चलाखी पूर्ण तरिकाले विवाद भईरहेको बेला खिचेको फोटो क्याविन क्रुलाई देखाउँदै आफ्नो परिचय दिए । र भन्न थाले ‘म जर्नलिष्ट हुँ यो मेरो मान्छे भएपनि यसको समाचार बनाएर बेईजत गर्छु त्यसैले मिल्छ भने मलाई वाईफाईको ब्यवस्था गरिदनुस् ।’
जव मैले फोटो देखाउँदै क्यविन क्रुलाई समाचार बनाउँछु भनेर अनुरोध गरे तव उनीहरुको मुहारमा अर्को प्रकारको डर देखियो र उनीहरुले मसंग नै रिक्वेष्ट गरेर भन्न थाले ‘पिल्ज यो फोटो चाँहि डिलिट गरिदिनुस् न्यूजमा आयो भने हाम्रो कम्पनीको बदनाम हुन्छ । ‘ तव मैले फेरी चलाखी अपनाएर भने यो फोटो तपाई आफै डिलिट गर्नुस् तर उहाँलाई कारबाही हुनबाट एक पटक रोकिदिनुस् ।
सिधा भन्ने हो भने मैले आफ्नो मान्छेलाई कारबाही हुनबाट जोगाउँनु थियो त्यो मेरो मन भित्रको मान्छेको एउटा धर्म पनि थियो । त्यसकारण विमानका कर्मचारीहरुलाई कुनै न कुनै कारणले कन्भिन्सड गरेर पासपोर्ट फिर्ता गराउँनु एक मात्र उद्देश्य थियो मेरो । उडान निति अनुसार विमान भित्र चुरोट पिउँनु गम्भीर अपराध सरह हो । यदि कसैले त्यस्तो गरेमा कडा भन्दा कडा सजाय हुन्छ र त्यो ब्यक्ति हवाई यात्राका लागि ब्ल्याक लिष्टमा पर्दछ।
तर पनि आफ्नो टिमको मान्छे भएका कारण मैले खिचेको उक्त फोटो डिलिट गर्ने र पासपोर्ट फिर्ता गर्ने सर्तमा एक एयर होस्टेजलाई मैले मोबाईल दिएर फोटो डिलिट गर्न दिए अनि उनीहरुले पासपोर्ट फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
जव मोबाईलबाट खिचिएको उक्त फोटो डिलिट भयो तव उनीहरुले ककपिटमा पुनः फोन गरेर माहोलको जानकारी गराए । भाग्य बस विमान चालकले उक्त गतिविधिको जानकारी विमानस्थललाई दिएका रहेनछन् ।
जव फोटो डिलिट भयो तव सुरजलाई तानेर मैले सिट तर्फ लिएर आए र उक्त गतिविधिको जानकारी निर्देशक सुर्दशन थापा लगायत थप दुई पत्रकार कान्तिपुर दैनिकका सुशिल पौडेल र सिनेमा नेपालका दिनेश सिटौलालाई गराए । त्यस पश्चात सुर्दशन थापाले पनि सुरजलाई अलि नम्र भएर गाली गर्न थाले । चुरोट काण्डले ब्यईजत हुने डर र एयरपोर्ट दुवई प्रहरीद्धारा आफूमाथि कारबाही होला कि भन्ने डरले सुरज सिटमा बसिरहे । म पुनः विमानको पुछार तर्फ गए र पासपोर्ट फिर्ता गर्न अनुरोध गरे । त्यस पश्चात उनीहरुले केही समय पछि सुरज आफैलाई पासपोर्ट दिन्छौ भनेर मलाई प्रतिबद्धता जनाए । प्रतिबद्धता अनुरुप क्याविन क्रुका एक सदस्य आफैले सुरजलाई पासपोर्ट दिएँ र माहोल शान्त भयो ।
प्रसंग दुई :
हाम्रो टिम बिहानको चार बजे तिर दुवई एयरपोर्टमा पुग्यो । त्यति बेला सम्म सुरजले विमान भित्र गरेको हर्कतको जानकारी धेरैले पाईसकेका थिए । धेरैले सुरजको ब्यबारलाई निच ब्यवहार समेत भन्न भ्याए । बिहानको समय एयरपोर्ट बाट ६२ किलो मिटरको दुरी पार गरेर होटल पुग्यौ । केही घण्टापछि ब्रेकफाष्टमा ज्वाईन भयौ । त्यो बेला सम्म सुरजको गतिविधिका बिषयमा निकै आलोचना भयो ।
साँझ अवार्डको मुख्य समारोह थियो त्यस अघि कोही घुम्न निस्किए कोही अवार्डको तयारीमा जुटे कोही अन्तिम रिहर्सलका लागि निस्किए । साँझ अभिनेता निखिल उप्रेती, संचिता लुइँटेल, दीपाश्री निरौला, केकी अधिकारी, बेनिशा हमाल, धुर्मुस् सुन्तली, पल शाह, सलोन बस्नेत, रिष्ता बस्नेत , नेफ्टाका अध्यक्ष पुष्कर लामा र म लगायतको एक टिम लेमोजिनमा चढेर कार्यक्रम हल पुग्यौ ।
तर जव कार्यक्रम हल पुगियो तव आर्यन सिग्देल र करिश्मा मानन्धर किन आउँन सकेनन भेरर नेफ्टाका उपाध्यक्ष गणेश सापकोटाले सुरजलाई गाली गर्दै थिए । अन्य सेलिब्रेटी हरु आईपुग्दा पनि आर्यन र करिश्मा कार्यक्रममा नदेखिएको मुख्य कारण थियो मेकअप र ड्रेसअपमा ढिला अनि महासचिवको आचार्यको वेवास्ता ।
त्यसकारण उनीहरुलाई किन ल्याउँन सकेनौ भनेर गणेश सापकोटाले सुरजलाई हात पात गर्ने शैलीमै हप्काउँदै थिए । पुनः मैले र त्यहाँ उपस्थित केही ब्यक्तिले सो माहोललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयाश गर्‍यौ तर मदिराले लट्ठ भएर कसैको कुरा नसुनेका आचार्यलाई त्यहाँ सम्हालन सकिएन बरु उल्टै मैले गजे भयो भईहाल्यो हात चाँहि नहाल्नुस् है आफ्नै टिमको बेईज्जत हुन्छ भनेर गणेश सापकोटालाई सम्हाल्न थाले ।
केही समय पछि आर्यन र करिश्माको आगमन भयो । जुरीहरुले नतिजा तयार गरिसकेका थिए । तर आयोजक नेफ्टाका अध्यक्ष लगायतको टिमले जुरीको नतिजा पर्खिरहेका बेला पुनः महासचिवले नतिजा अगाडीनै दिनुस भनेर जुरीलाई दवाव पनि दिएको एक जुरी सदस्यले हामीलाई जानकारी दिएका छन् ।
अवार्ड समारोह चलिरहेको थियो म एकछिन फ्रेस हुन बाहिर गएको थिए त्यतिबेला सुरज पनि बाहिरै थिए र उनले मलाई एक्लै देखेपछि हप्काउँन लागे ‘तिम्रो रुद्र घण्टी छैन् एउटा सानो कुरालाई ठूलो बनाएर सवैलाई सुनायौ । ‘ उनका अनुसार प्लेन भित्र चुरोट सल्काएको कुरो सानो रहेछ । म अचम्ममा परे र जंगिदै जवाफ फर्काए ‘सारा यात्रुको जिवन जोखिममा राखेर तपाई चुरोट पिउँने अनि त्यो कुरालाई सानो भन्न लाज लाग्दैन ।’ मैले त्यसो भनेपछि सुरज केही हच्किए ।
नेफ्टा अवार्डको तयारी अघि बढ्दै गर्दा करिब एक महिना अघि देखिनै विभिन्न कृयाकलापका कारण कार्यसमिति भित्रै विवादमा पर्दै आएका सुरजको प्लेन भित्रको चुरोट काण्ड, कार्यक्रमका सुरु हुनु अघि मदिरा पिएर दिईको जिम्मेवारी निभाउँन नसकेको प्रसंगले नेफ्टा अध्यक्ष लगायतको टिम उनीसंग पूर्ण रुष्ट बनेको थियो । जुन रुष्टातको कारण सुरज माथि अनुसाशनको कारबाही गर्ने तयारी नेफ्टा अध्यक्ष लगायतको टिमले दुवईमै गरेको थियो ।
त्यसकारण सिधा भन्नू पर्दा कारबाहि हुने डरले पानी माथिको ओभानो बनेर सुरजले नेफ्टा अवार्डमा मनोमानी भएको प्रंसग झिकेर राजिनामा दिएको जायज देखिदैन । किन कि अवार्डमा सहभागी हुन पुगेका हरेक ब्यक्तिले भनेका छन् यस पटकको कार्यक्रम र ब्यवस्थापन शैली प्रसंसनीय थियो । जहाँ खोट लगाउँने ठाउँ खासै देखिदैन ।
एक प्रतिनिधित्व भनाई राख्ने हो भने पछिल्लो समय सिक्किममा आयोजना भएको ईनाश अवार्डको खुलेरै विरोध गरेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले समेत नेफ्टा अवार्डको तयारी, भब्यता र पाएको शिष्टताको मुक्त कण्ठले तारिफ गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् ‘अवार्डको रिजल्टमा जे जस्तो प्रतिक्रिया आयो त्यो अर्को पाटो हो तर ब्यवस्थापन शैली र कार्यक्रमको भब्यताबाट मलाई नेपाली कलाकार हुँ भनेर प्राउड फिल भयो । ‘ यस्तै दीपकराज गिरी, प्रदीप उदय र नीर शाह जस्ता हस्ती फिल्मकर्मीले समेत दुवईमा भएको नेफ्टा अवार्डलाई मुक्त कण्ठले तारिफ गरिसकेका छन् ।